Pharmacy - Nyore Multi Ratidza - Iyo Yakanakisa Dhijitari Signage Software!
Simbisa pharmacy yako
RATIDZA RUDZIKI RWAKO RWEMUFUNDI
KANA HWEMPENYU YENYAYA
Wedzera kuvimba uye kunatsiridza varwere vako kumirira ruzivo ...
Kunyangwe iwe uine nzvimbo yekutandarira yedhorobha yekurapa kana kupa inodzivirira yehutano hwekudzivirira, Easy Multi Display inobatsira iwe kuwedzera varwere vako kuvimba nebasa rako uye nekuvapa iyo yekumirira chiitiko ruzivo rwavagara vachida.
Bata nesu nhasi kuti tikurukure zvaunoda uye tanga kugamuchira mabhenefiti ekuratidza bhizinesi rako neinodhura uye yakapusa midhiya inoratidza software pamusika.
Dhawunirodha Brokisheni Bhurocha (fr)Wana Instant Access
Dhawunirodha Bhurocha reFarmacy (en)Wana Instant Access
NZVISIRA PASI PASI YEMUKADZI KUKOSHA
Varwere vako vakamirira nguva vachabhururuka apo paunoshandisa Easy Multi Display kufadza varwere vako apo ivo vakamirira kugadzwa kwavo.
GADZIRA KUVIMBIRA MUBASA RAKO
Nekudzidzisa varwere vako pane rako bhizinesi uye rako rehunyanzvi, varwere vako vanofamba vachienda vachinzwa pfungwa yakakura yekuvimba nebhizinesi rako.
SHOWCASE BASA RAKO BASA
Iwe unopa akawanda masevhisi, kana kukwidziridzwa kwekubatanidza masevhisi? Ino ndiyo mukana wako wekuratidza varwere vako pane zvavanenge vapihwa.
Sezvo sezita rinoratidza, Easy Multi Display iri nyore kushandisa. Ini hapana chandinoziva nezvemakomputa. NeEMD isu tine chaiwo akaenzana dijitigine signage mhinduro yehofisi yedu yemazino.
Iyo ine simba signage solution mune yedu yemuviri maitiro inozivisa uye inovimbisa varwere vedu. Izvi zvinoita kuti zvikwanise kuisa kumeso kumashure kwemazita evashandi vedu. Isu tinoratidzawo mazano anoshanda kune varwere vedu. Inobatsira uye inoita kuti kumirira kupfupi.
Physiotherapy Dzidzira, Wavre